Abaalmarinta buugaagta:- Sheekada laga Qoray Ninkii Soomaaliga ahaa Ee Lagu Daldalay Britain | Gaaroodi News
Abaalmarinta buugaagta:- Sheekada laga Qoray Ninkii Soomaaliga ahaa Ee Lagu Daldalay Britain
Bishii September 1952, qofkii ugu dambeeyay ee lagu daldalay Cardif, Britain, ayaa meeshii lagi dilayay la saaray.
Maxamuud Mataan ayaa si khalad ah loogu hlay dembi ahaa in uu dilay qof dukaan iibinayay oo lagu magacaabay Lily Volpert, oo ku sugnayd Tiger Bay ee Cardiff.
Nadifa Maxamed oo buug ka qortay sheekada ninkan waxay sheegtay in arrinta ay ku dhalisay ka dib markii qeyb ka mid ah buuggeeda mala-awaalka ah ee The Fortune Men, ay kaga hadashay sheekada Maxamuud Mataan.
Balse, Nadifa Maxamed, ayaa la yaabtay markii ay ogaatay in qofkii ugu danbeeyey ee lagu daldalo gobolka Wales, ee dalka Britain, uu ahaa Soomaali.
Inta badan Soomaalida Britain u safartay waxay halkaas gaareen wixii ka dambeeyay 1990-kii, Nadifa-na ma aysan qiyaasi karin in Soomaalida ay halkaasi ku sugnayeen muddo ka badan boqol sano.
“Horay way u jireen sheekooyiin la xiriiray dhibbaneyaal ay booliska ku xadgudbeen, balse sheekadiisa way ka sii fogey arrimahaas, shaqsi ahaan,” ayey tiri.
“Dadka yaqaana waxay sheegaan in uu ahaa qof adag oo dhiiran, kuna faraxsanaa in uu difaaco xuquuqdiida iyo xaqa dadka ku hareereysan”, ayey tiri Nadiifo.
“Waxaan aaminsanahay in taas ay qeyb ka ahayd sababta booliska ay isaga u bartilmaameedsadeen in ay ahayd in dusha loo saaro dembiga ugu dambeeya ee ugu wayn ee halkaas ka dhaca.”
Labadaba, Nadifo aabeheed, Maxamed iyo Maxamuud waxay ku dhasheen Somaliland, waxayna isla kulmeen markii ay u safrayeen Hull oo UK ah.
“Labadoodaba waxay la socdeen Ciidanka Badda, balse nolol ahaan waxay kala qaadeen laba dhabbo. Aabahey wuxuu dhahay in Maxamuud oo ahaa qof iska caadi ah oo keli-ahaanshaha jecel,” ayey tiri.
Guddiga qiimeeya buugaagta ee The Booker Committee, ayaa la filayaa in buugga ay qortay Nadiifa ee The Fortune Men, ay ku soo daraan kuwa la xushay ee Bisha September ee sannadkan, abaalmarintana waxaa la bixin doonaa bisha November. Qoraa Nadiifa Maxamed aabeheed wuxuu garanayay Maxamuud Mataan.
Balse, sheekada Maxamuud Mataan, ayaa markaad u fiirsataba, waxay ku tusineysaa arrin weyn oo midab takoor iyo caddaalad darro maxkamadeed ah, taasoo ahayd noolasha Soomaalidii badmaaxiinta aheyd ee u talaabtay Britain.
Soomaaligii ugu horeeyey ee yimid Cardiff waxaa la diiwaan galiyey inta la og yahay qarnigii labaatanaad, ka gadaal markii la furey Kanaalka Suez.
Ha yeeshee way yaraayeen illaa iyo intii laga soo gaarayey 1914-kii, markii uu bilawday dagaalkii koowaad ee dunida, waxaa kordhay baahida loo qabo dadka xoogga leh, si loogga faa’iideysto xooggooda shaqooyinka adeegga ku saleysan.
Raggani waxey ahaayeen dad reer guuraa ah, wax dhib ah kuma aysan qabin safarka ku saleysan guur guuridda. Waxaa jirta maah maah Soomaaliyeed oo oraneysa “Nimaan dhul marin, dhaayo ma leh,”. .Ma jirin caddeyn lagu hayay Maxamuud Mataan.
Raggii caddaanka ee shaqo doonka ahaa waxay weerar ku ekeeyeen dadkii madoobaa iyo guryihii ay ku noolaayeen, ayey tiri Nadifa Maxamed, oo ah qoraa asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeddo balse British ah, taas oo ka shaqeyneysa sidii ay usoo saari laheyd buug ka hadlaya Maxamuud Mataan, “halka Soomaalidii, iyo madowgii kale ee ku dhaqnaa goobtii uu weerarka ka dhacay ay iska caabiyeen kuwii soo weerarey”.
Waxaa muuqatey in weerarka kadib dadkii qaarkood ay isaga tagaan goobtaasi, laakiin kuwa kale ayaa ku harey goobtii, kuna adkeystay iney sidoodii usii noolaadaan, waloow shaqooyinkii la heli jirey ay hoos u dhaceen.
Maxamuud Mataan, ayaa Butetown gaaray sannadkii 1940-kii. Wuxuu ku dhashey maammulkii Somaliland ee Britain hoostegi jiray ee sanadkii 1922-kii, isagoo raacayay raadka dadka kale ee bulashadiisa, ayuu helay shaqo markab.
Sannadkii 1945-tii waxey is barteen Laura Williams, oo aheyd gabar 17 sano jir ah oo kasoo jeeda dooxada Rhondda, taas oo ka shaqeyneysay warshad sameysa warqadaha, saddex bilood kadibna wayba is guursadeen.
Labadan qof ee is calmadey waxey dhaleen saddex carruur ah, ha yeeshee waxaa aad ugu adkaaday iney helaan goob ay si wadajir ah ugu wada noolaadaan oo bulshaduna u ogoshahay. Markii uu dhacayay fal lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Lily Volpert, qoysaskani ma wada nooleen. Butetown, oo xilligaas loo garanayay Tiger Bay, waxay ahayd meeshii soo jiidatay shaqaale caalami ahaa oo ku kala sugnaa daafaha caalamka, sida dadkii ku noolaa deeggaannadii Britain ay gumeysatay ee Soomaaliya.
Lily Volpert waxey ku jirtay da’da afartameeyada, waxay lahayd dukaan ku yaalla waddada Bute, kaasoo aan ka fogeyn xeebta ay kuxirtaan maraakiibta.
Xilli fiid ah 6-dii March, 1952-dii, meydkeeda ayaa laga helay dukaanka, iyadoo dhiig baxday, oo goorta loogga gooyey sakiin. Lacag lagu qiyaasay £100 oo haatan u dhiganta £3,000 – ayaa laga xaday dukaanka.
Mataan waxaa la xirey markii Cover uu siiyey booliiska warbixin labaad, taasoo ka hor imaneysa tiisii koobaad – qoyskii ay ka dhalatey Volpert ayaa balan qaadey £200 oo abaalmarin ah ciddii soo gudbiso warka arrintaasi la xiriira.
Booliiska qaarennadii difaacayay Mataan waxay ka qariyeen in afar qof oo goobta ku sugnayd marka uu dilka dhacayay ay dhamaantood sheegeen in Mataan aanay goobta ku arag, iyo weliba in gabar 12 sano jir ah oo meesha joogtay ay sheegtay in Mataan uusan meesha tegin maalintaas. Qoys ku noolaa Tiger Bay, 1939
Qoyskii Maxamuud Mataan ayaa waxaa loo xukumay magdhaw gaaraya 1.4 million oo giniga Ingriiska ah, Waa markii ugu horeysay oo ay wasaaradda arrimaha gudaha Ingiriiska magdhaw siiso qoyska qof si qald ah loo daldalay. Jaldiga buugga The Fortune Men ee Nadiifa ay qortay.
Waxaa qabrigiisa lagu dhejiyay dhegax lagu qoray “caddaalad darro ayaa lagu dilay”.